NYI LYNN SECK 18+ DEN: ရာဇဝင်များရဲ့သတို့သမီး (၁)
Posted by NLS at 10/29/2009 09:56:00 PM
MTV အတွက်ဆိုရင်တော့ ဒီscript လေးက အရမ်းကောင်းပါတယ်။ Word Verification ကိုဖြုတ်ထားလို့ရမလား မသိဘူး။ သူက ဘာမှထွေထွေထူးထူး မဟုတ်တော့လေ။
Main character နေရာမှာ လူမင်းတော့ မထည့်နဲ့နော်။ (မြန်မာမင်းသားတွေ တစ်ယောက်မှ မထည့်လိုက်နဲ့)
nyilynnseck.com မှာ ရေးထားတဲ့
* အိပ်မက်ထဲမှာ ကြည့်ခဲ့မိသော ရုပ်ရှင်
* အခန်းအမှတ် သုည
* စာအုပ်အဟောင်းဆိုင်က ကောင်မလေးအတွက် မရေးဖြစ်ခဲ့မိသော အမှတ်တရစာ
* ကျွန်တော်နှင့် အခြားသော အရာများ
* တောင်ကုန်းလေးတစ်ခုပေါ်က ဘယ်တော့မှ ပြန်မတွေ့တော့သော နေကြာပန်းများ အကြောင်း
* ပထမဆုံးနဲ့ နောက်ဆုံး
* အနီရောင်မင်နဲ့ ရေးခဲ့မိသောစာ
1. ကြယ်တွေမွတ်သိပ်တဲ့မြို့က ချစ်သူရဲ့ ညတွေ
3. ကျွန်တော် အဝေးဆုံး ရောက်သွားတဲ့အခါ
4. ကျွန်တော်နဲ့ စကားပြောခြင်း
5. ကျွန်တော့် အခန်းထဲက သူမထွက်ခွါသွားသောအခါ
6. ကျွန်တော်နဲ့ ကတိကဝတ်များ (အိုင်ဒီယာ မဂ္ဂဇင်း)
17. ချစ်သူ (၁)
18. ချစ်သူ (၂)
22. ငါ့ကိုလေးလံစေသူများ (အိုင်ဒီယာ မဂ္ဂဇင်း)
23. ငါတို့ကိုခြားထားတဲ့ ဆူးရိုးတံခါးတွေ ဝေးသွားတဲ့အခါ
24. ငါ့ဓါးသွားများ ငါ့ကိုယ်ထဲ ပြန်မစိုက်မီအထိ
25. ငါ့ရဲ့မြင်းမှာ အတောင်မပါခဲ့ဘူး
28. ငှက်ကလေး အိမ်မပြန်တဲ့နေ့
30. စုန်း (၂)
32. ညီမလေးနဲ့ ကျောင်းတော်ရဲ့ အဝေးမှာ
33. ညီမလေးက လက်သည်းမရှိတဲ့ ကြောင်တစ်ကောင်
34. ညီမလေးမသိတဲ့ အရောင်များ
38. တိုးတိုးလေးနဲ့ တိုတိုလေး
40. တိမ်တွေနဲ့ တည်တဲ့မြို့
46. နွေရာသီတေးကို ဆိုခဲ့သော ချစ်သူ
52. ပင်လယ်ကိုသွားတာ ငါးဖမ်းဖို့
55. ဗန်ဂိုးရဲ့ နေကြာခင်းတွေထဲမှာ
56. မင်းသားလေးနဲ့ ပန်းကလေး
58. မုဆိုးများနဲ့ သူတော်စင်များ
61. မျက်ကန်းတေးသွား ၂ဝဝ၅
62. မြွေ (၁)
63. မြွေ (၂)
65. ရနံ့တွေ ခူးနေမိတဲ့ကောင်
66. ရယ်စရာ မောစရာ
68. လရောင်နဲ့ မှောင်နေတဲ့ကောင်
69. အောက်ပြည်က ဗန်ပိုင်းယား
72. ရွာချလိုက်တော့မိုး (အိုင်ဒီယာ မဂ္ဂဇင်း)
73. လတ်ဆတ်ခြင်းကို သစ်ရွက်များ မစွန့်ထုတ်နိုင်တော့ပြီ
77. အိုစီပေးလ်တွေ သိပ်မပေးနဲ့
81. ဟမ်းဖုန်းကြီးနဲ့ လည်ကတုံးနဲ့
82. အဲဒီညက နေဝင်တယ်
83. အေးစက်သော ခေါင်းလောင်းထိုးသံတွေ ကြားတဲ့အခါ
86. အိပ်စက်ခြင်းများနဲ့ ငါနိုးနေခဲ့သူ
87. အိပ်ပျော်နေခဲ့သော ချစ်သူသို့
အဲဒီ စာတွေအားလုံးကို တစ်ထိုင်တည်းဖတ်ချင်တဲ့အတွက် မေးလ်ကို ပို့ပေးနိုင်မယ့်နည်းလမ်းလေးရှိရင် ပို့ပေးစေချင်ပါတယ်။ ဖတ်ပြီးသားတွေလည်း ပါပေမဲ့ အားလုံးစုစုစည်းစည်းလေး ဖတ်ရရင် ပိုကောင်းပါတယ်။ အင်တာနက်ကို ဆိုင်မှာသုံးရတဲ့အတွက် တစ်ပုဒ်ချင်းဖွင့်ဖတ်ရတာ အရမ်းအဆင်မပြေလို့ပါ။ အကုန်လုံး တစုတစည်းတည်းမရှိရင်တောင် စုဆောင်းထားသလောက် ပို့ပေးနိုင်ရင် အဆင်ပြေမှာပဲ။ ဘာကိုမှ ခွင့်ပြုချက်မရဘဲ ယူမသုံးပါဘူး။ စာဖတ်ချင်ရုံသက်သက်ပါလို့ အာမခံပါတယ်။ တကယ်လို့ တစ်နေ့နေ့မှာ စာအုပ်အဖြစ် ထုတ်ဖို့ရှိလာခဲ့ရင် layout ချပေးချင်တဲ့အထိ စာတွေကို စုစည်းထားချင်လို့ပါ။ Feed ကနေ Subscribe တော့ လုပ်ထားတယ်။ အရင်က blog ထဲ ၀င်ပြီးဖတ်နေကျမို့ subscribe လုပ်ထားတာ သိပ်မကြာသေးဘူး။
If you want, send to
နှင်း ကဗျာလေး အရမ်းနှစ်သက်လို့ postcard လုပ်ထားမိတယ်။ အပြင်မှာ မဖြန့်ပါဘူး၊ အမှတ်တရပါ။
မြန်မာမင်းသားတွေ တစ်ယောက်မှ မထည့်နဲ့ဆိုတော့ ဘယ်သူကို ထည့်ပါ့။ ဆရာ အှောပီကျယ် ကာတွန်းထဲကလို ကျွန်တှောတို့လဲ ကြည့်စရာက ဒါပဲရှိတာ ဆိုသလို ဖြစ်နေပြီ။ :)
ဥပမာ - စာရေးဆရာ ကိုယ်တိုင်ဖြစ်ဖြစ်
http://www.nyilynnseck.com/ က ကဗျာတွေ နဲ့ ၀တ္ထုတိုတွေ အကုန်ပေးဖတ်ဖို့ လင့်ခ်လေးတွေ ထားပေးစေချင်တယ်။
တချို့ဟာတွေက ဘလော့ထဲမှာ မရှိဘူးလေ။
ဟုတ်ကဲ့ ကျွန်တှော အားတဲ့တစ်ရက် အားလုံးကို ပို့ပေးနိုင်အောင် ကြိုးစားကြည့်ပါမယ်။ နှစ်သက်တယ်ဆိုတာ သိရလို့ ဝမ်းသာပါတယ်။ အခုလောလောဆယ်တော့ တှောတှောလေး အလုပ်ပိနေတာမို့ ဒီဘက်တောင် မလှည့်နိုင်သေးဘူး ဖြစ်နေတယ်။
Word Verification က မထည့်ရင် မရပါဘူး ခင်ဗျာ။ သူမထည့်ထားရင် Spam Comment တွေ တရဟော ဝင်လို့ပါ။ ဒါကိုတော့ သည်းခံပါ။
ကိုညီလင်းဆက် ကိုတော့ တကယ်လေးစားပါတယ်။
ဒီလောက် ရေးနိုင်လုပ်နိုင်တာကို အားကျမိတယ်။
သိပ်မတွေးစေချင်ပါ... main character..
ဘလော့ဂ်မှာလို...Word Verification ထဲ့ဘို့...
HI.reading your post, good writing..:)
ရာဇဝင်များရဲ့ သတို့သမီးရဲ့ သီချင်းလေးကို ပြန်ရှာနားထောင်ရင်း ဒီစာလေးကို ဒုတိယအကြိမ်လာဖတ်တာပါ။ ရင်ထဲမှာတော့ မုဒ်အသစ်တမျိုးနဲ့ ခံစားလိုက်ရတယ်။VCDအဟောင်းကြီးက မြင်ကွင်းတွေ ပျောက်အောင်တော့ ကြိုးစားမေ့လိုက်ရသေးတယ်။
Hi Bro, Happy Sweet December
.သွားလည်နေကျဘလော့များ Link ချိတ်ထားပါတယ်ရှင့် ကျေးဇူးပါနော်..